Matahotra CPI dia nitsoaka i Andry Rajoelina? – MyDago.com aime Madagascar
Toy ny mahazatra dia ambohim-pihaonana indray i Magro Behoririka tamin’ity androany ity.Samy nohaino sy nifantoka tamin’ny kabary mafana avokoa ny mpiara-mitolona : Andramena, 4 miliara, fifidianana : ireo no saika voaresaky ny mpikabary, ireto entinay aminao ireto ny ambangovangony voarainay teny an-toerana :
Guy Roger : misahotakakotaka sy mikorontandrotana ny FAT. Ny vola 4 miliara ariary dia sinema tsy misy mpijery. Manaiky izahay fa fanadinam-bahoaka malagasy ny CEPE, BEPC ary indindra fa ny BAC kanefa tsy azo atao ankamehana satria ny ho avy ny taranaka no jerena. Lasa andrakandrana ny vahoaka Malagasy ankehitriny satria lasa fitaovana hitondrana rongony na zava-mahadomelina hafa satry te ho tafa sy tsy hijanona eto ary lasa manao vy very ny ainy. Noho ny zavatra rehetra mitranga dia mivonoana hatrany isika.
Navalona : tsy manam-bola ho an’ny CT ny marina ny FAT dia rebirebena. Aza
Miandry fotsiny any an-trano intsony fa tongava daholo ianareo ka rehefa tsy
omby eto dia mankeny Mahamasina isika, tsy mbola leo sy tofoka ny FAT ve ianareo ? Izahay dia efa tofoka tanteraka.
Ignace : ho lasa mpandraharaha ny andramena ve izany ny FAT ? Mila
Manao tolo-bidy tahaka ny nataon’i Ravalomanana ny FAT fa tsy hanao kian-trano an-trano toa io.Tsy resaka siosio fa ny FAT mihitsy no ao anatiny ny fanondrana andramena io.
Momba ilay tranga tetsy Tsimbazaza , na misy ilay vola dia misy mpiray tsikombakomba na ao Tsimbazaza na any amin’ny hafa. Na tsy misy dia manao sinema ianareo . Manome mpiambina ny trésor rehefa volabe. Raha tany Ambanidia dia nariany taiza ny vola ? Halatra manara-penitra iny raha nisy ilay vola satria institution io ka ahoana no vola taratasy? tsy zone franche anie ny ao Tsimbazaza. Ary volan’ny vahoaka malagasy io ka tompon’andraikitra izy, mila mahalala ny marina. Fanondranana olona no atao toy ny any Jordanie ary noho ny adalanareo no tsy mampisy ny asa eto an-tanana toy ny AGOA. Ry tanora aza mipingapinga ho any amin’ny tany arabo fa manahirana ny miasa amin’ny tany arabo ary mety mahafaty mihitsy aza. Tsy nisy resaka olana ben’ny tanana teto fa ilay ben’ny tanana no mipigampiga no filoha nefa filoha ny inona ?Te hijanona ela be eo ireo dia mody ataony fifidianana ambany aloha.
Charline : Aoka tsy ho variana amin’ny sinema an’FAT satria efa milahatra amin’ny tany faran’izay mahantra Madagasikara. Rehefatonga Ravalomanana dia ekena ny fifidianana
Dominique : fananan’I Andry Rajoelina ve ny volam-panjakana ? Ny olona rehetra ao amin’ny FAT dia manana mpiambina ka vola be ve dia tsy misy mpambina ? Na voaporofo fa tsy misy vola ny FAT satria hiditra fivoriana tsy ara-potoana izao dia lasa nitady vola i Andry.Takotakonana amin’ny io 4 miliara ny saim-bahoaka mba tsy ho any amin’ny CPI. Efa tsy mandeha intsony ny FAT’sambo ka antsoy amin’ny izay ny amiraly hitondra, Ravalomanana hanamboatra sy hitondra izay azo ataony ary i Zafy hitondra ny sambo fa indindra ireo mpandeha. Manaovana marenina eo ihany dia hahita ianareo izay tratra farany eo rehefa mitaky ny vahoaka. Tandremo koa varina matory ryvahoaka fa ho avy Ravalomanana.
Tsianihy : mamangy ny fahoriana ry CT fa very fihinana ianareo. Maro izay nahazo ny ankolafy telo sy ny rodobe ary tsy mifandanja ny herin’ny miaramila sy ny vahoaka kanefa dia nodabohanreo izahay. Izao anefa dia hoe very ny vola ka lasa aiza ireo miaramila ? Ny marina dia miaka-dapa ny malaso sy ny jiolahy ary atoato dia hanao fandaniana làlana. Soa fa hoa avy ny tompom-pahefana. Raha nieritreritra fifidianana tokoa, firy ireo mpianatra mitaky vatsim-pianarana, ireo vatatay vao nampidirina. Io ary tsy voaloha koa fifidianana fifidianana, odoye !
Manoela : matahotra CPI dia nitsoaka i Andry Rajoelina. Aleo koa any amin’ny tany hafa indray ny mpianatra malagasy mianatra fa tsy any Lafrantsa foana, Lafrantsa izay Mangata-bola amin’ny Alemana fa tsy manana vola afa-tsy ny harena ny tany nozanahany. Mety hamela anareo i Dada ry mpamadika palitao fa izahay tsy manadino ny ratsy nataonareo. Ianareo variana loatra nivory sy manao palitao.
Zafilahy : manome toky i Ampitatafika fa ho avy na indroa isaky ny herinandro aza. Tsy takona afenina intsony na dia kobokobonina aza. Nisy nanafika hono ny volany CT, mbola mihevitra ny vahoaka tsy mahalala zavatra tsy mety amin’ny tanana. Tsy voafehy intsony ny fitanatanana indrindra fa ny fandriam-pahalemana. Aiza ny mpiambina ? Sarinady indray ilay izy.
Manda daholo ny teny fa tsy nahita ary ireo mpivarotra akaiky ny parka aza nilaza fa efa tamin’ny 6 ora maraina no teo fa tsy nahita ninina. Lalaovina fotsiny ianareo ry CT, hataony mahamay na resaka andramena na karama ankehitriny.
Izahay no nanambotra ilay “immunité” satria tsy mety ary Ravalomanana no nahita ny tsy fetezany voalohany satria ny mandinika mahamay rehefa tratra kanefa ny be vozona mirehareha raha tsy tratra ambodiomby. amin’ny teniny ihany izy no tsy azo henjehina, izay midika fanehoana hevitra ihany. Tsy manana vola handohavana ny karamareo izy dia hoentina milaza fa efa nanome ny fanjakana fa lasa ny dahalo. Faharoa voa koa ianareo izay milaza hatrany fa milamina ny tanana, hitany ny CPI iny fa tena mbola tsy milamina ary vola ho any institution aza misy manamboatra. Isaorana ny Tompo fa lasa tombontsoa ho antsika indray ny tsy fandriam-palemanana iny, tsy milamina izany ny tany.
Io andramena io na totofana aza tsy miova ny anarana ao anaty lisitra. Na eto ianao na tsia, iraisam-pirenena io ka tsy mantsy tratra ianao. Tsy mety mandray
mpangalatra andramena ny amerikana. Raha izaho i Andry miala aho na ekeko daholo ny tapaka rehetra mba tsy ho fahavalom-bahoaka fa tsy dia hiziriziry eo foana ka ho AMHI ny farany.
Fantatr’i Ravalomanana fa tsy mantsy mody izy fa tsy te hody tanampolo ho an’ny malagasy tsy an’asa ohatra. Tsy mizarazara zavatra kely no vahaolana fa asa dia minakanina tsara dia tsy miditra hopitaly. Ka miandry ny vahoaka fa lafo ny lamba ary sarotra ny mameno kibo. Ho marihana tsara iny herinandro iny ary hatomboka sabotsy.
Rodin : antsoina ny tafika fa lany ny harem-pirenena. Aoka isika tsy hiandry mpitarika fa ho mpitarika daholo. Jereo ny milaza azy ho mpitondra mivoaka mangingina nefa mbola tsy fanao teto izany.Nilatsa-potaka ny 4 miliara. Tsy malahelo aho satria tsy mahazo vola ny gidro
ao Tsimbazaza, raha vola ho any zavatra hafa mety ho hafa. Izy avy moa ireo
manana Hummer eto raha tsy ianareo ihany ? Ary otrinina no vidiny ireny ? Fa
manina koa tsy mbola hita ireo mangalatra ireo vola ireo ? AnyUSAi Chissano mikofesy.Ary any Frantsay sy ny maorisina kay iny Sori-dalana iny ka tsy tafa ilay izy dia giazan’ny maorisiana ny andramena any amin’ny ny. Izao dia misidina ny helicoptère mandany kero nefa ny 1 centime aza tsy hiditra ho any ny vahoaka. Iry ireo sary navoaka dia tamin’ny andro fahagola. Mitomany ny fananany i Madagasikara. Ho avy anefa ilay olona hatahorana ka dia omena kapsily daholo amin’ny zay tsy migadra. Milaza ilay ministra ny mponina fa tsy misy vola ao amin’ny ministera nefa mitety any i Madagasikara ary mizara zavatra hatrany. Avy aiza ary ireny vola ireny.
3 pensées sur “Matahotra CPI dia nitsoaka i Andry Rajoelina?”
Trafic bois de rose: 5 réseaux et des millions d’euros pour la HAT
A lire sur http://www.malagasymandroso.org
Saiky hiana-kendry tany Amerika, koa voadaka fitombenana tsara domelina mianakavy!
« VIVE L’AMERIKA »! tiako be ianareo ry AMERIKANINA! tsy mba miatsara ivelatsia toy
ireto frantsay ireto, sadymitana ny teninareo ianareo fa tsy mivoaka sy miditra toy ny lelon-jaza ,soa fa teo
ianareo ,fa raha i la frantsa no nantenaina dia i domelina no presida mandra-pahafatiny,dia toa an’i SOMALIA
(sanatriavina ) sisa no HIAFARANTSIKA GASY.
Ashfere dit :
27 mars 2012 à 20 h 59 min
I wanted to fololw up and let you know how , a great deal I cherished discovering this blog today. I would consider it a honor to work at my business office and be able to make use of the tips provided on your website and also be a part of visitors’ feedback like this. Should a position associated with guest article writer become offered at your end, please let me know.
Précédent Article précédent : Nipoitra ny marina hoy ny dep Zafilahy Stanislas
Suivant Article suivant : Les tortures viennent-elles de monter d’un cran ?